मन्त्रालयको भागबन्डा सहमतिनजिक, माधव समूह पनि सरकारमा, को-को मन्त्री ? Nepalpatra मन्त्रालयको भागबन्डा सहमतिनजिक, माधव समूह पनि सरकारमा, को-को मन्त्री ?
मन्त्रालयको भागबन्डा सहमतिनजिक, माधव समूह पनि सरकारमा, को-को मन्त्री ?
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसले सात मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेको छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र पक्षलाई ६÷६ मन्त्रालयमा संवाद भइरहेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेको नेपाल समूहलाई ५ वा ६ मन्त्रालय दिने विषयमा शीर्ष तहमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । तर, अन्य दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने भन्दै संख्याको टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।